के हो यस्तो ?- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
के हो यस्तो ?
मंसिर १४, २०७६ दीपक केसी
स्वयम्भूका बाँदर ! काठमाडौंवासीका लागि यो भनाइको अर्थ चकचक र अनेक हर्कत गर्ने भन्ने लाग्छ । समाजमा यस्ता विम्ब र वाक्यहरु लामो समयको अभ्यास र मूल्यांकनबाट बन्ने गर्छन् ।
सबैले सधैं उस्तै अर्थ बोक्दैनन्। यही फोटोलाई हेर्नुस् ! दुई सातापहिले स्वयम्भूमा खिचिएको यो फोटोमा बाँदरले मानिसको हरकतलाई ध्यान दिएर हेरिरहेको छ। मानिसलाई बरू बाँदरको
नजरबारे थाहा भएजस्तो लाग्दैन !
प्रकाशित : मंसिर १४, २०७६ ११:०७